Fedora 35 ikozvino yave kuwanikwa, ine GNOME 41 uye Linux 5.14 | Linux Addicts
Fedora 35 ikozvino yave kuwanikwa, ine GNOME 41 uye Linux 5.14
pablinux | 02/11/2021 15:23 | Yakagadziridzwa ku 02/11/2021 15:24 | Noticias
Mushure meanopfuura mwedzi mukati beta chikamu uye vave yakaziviswa yedhijitari yakanaka kune veruzhinji, chirongwa chine zita rinobva muheti akakanda vhezheni itsva yesystem yako yekushandisa. Ndezve Fedora 35, uye adzoka kuzoita izvo Canonical isina kumboshinga: shandisa yazvino vhezheni yedesktop. Ichokwadi kuti iyo 35th vhezheni yeiyi inoshanda sisitimu yasvika dzinenge mavhiki matatu akaparadzana, asi zvakare kuti yaita izvi nezvimwe zviviri zvakawanda zvakagadziridzwa zvikamu.
Sezvo kuenzanisa kunonyangadza, tichavasiya pano, asi zvakakosha kutaura kuti Fedora 35 inoshandisa. GNOME 41. Vagadziri vacho vaifanira kugadzirisa matambudziko mashoma, uye ndicho chikonzero nei Fedora 35 yasvika pave paya pane zvaitarisirwa. Asi isu tatova nayo pano, uye kernel yainoshandisa nekusarudzika ndiyo Linux 5.14 yakaburitswa mukupera kwaNyamavhuvhu. Iwe une dzimwe nhau dzakasarudzika mushure mekucheka.
Fedora 35 Zvakakosha
GNOME 41. Zvimwe zvinyorwa zvinoshandisa Plasma 5.22.5, Xfce 4.16, uye LXQt 0.17.
WirePlumber ndiye maneja wechikamu chePipeWire uye anotitendera kugadzira mimwe mitemo.
yescrypt ndiyo nzira yekuchengetedza mapassword mu / etc / mumvuri.
Kugona kutangazve masevhisi evanhu mushure me RPM update.
Kuona otomatiki kwehukuru hwakakwana hweiyo encryption chikamu panguva yekuiswa kweFedora neLUKS / dm-crypt encryption.
Fedora Kinoite, itsva official flavour yakavakirwa paKDE.
Fedora Workstation yakatarisana nedesktop, uye kunyanya, yakanangwa nevagadziri vesoftware vanoda Linux inoshanda system ruzivo iyo "inongoshanda." Kuburitswa uku kunoratidzira GNOME 41, iyo yakavakirwa pakufungidzirazve kwematafura muGNOME 40 (iyo yakatumirwa muFedora Workstation 40). GNOME 41 inosanganisira kuvandudzwa kwesimba manejimendi. Iyo GNOME Software yakagadziridzwa zvakare muGNOME 41 kuti zviite nyore kufamba uye kuwana maapplication. Iyo zvakare inosuma maConnections, nyowani iri kure desktop mutengi yakavakirwa paVNC uye RDP.
Fedora 35 ikozvino inogona kutorwa kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora 35 ikozvino yave kuwanikwa, ine GNOME 41 uye Linux 5.14
Vhidhiyo yakatorwa. Yakaiswa software inopesana nemasevhisi epamhepo
Twister UI: yakanakisa sisitimu yekushandisa yeRaspberry Pi "inouya" kune desktop